कांग्रेसमा महाधिवेशन कसरी चल्दैछ शक्ति सङ्घर्ष ?
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको रन्को सुरु भएको छ। ७ देखि १० फागुन २०७७ मा १४औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसभित्र संस्थापन समूह, संस्थापन इतर समूह र पुरानो संस्थापन समूह (कोइराला परिवार) कसरी महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अघि बढिसकेका छन्। संस्थापन समूहबाट फेरि पनि सभापतिका लागि शेरबहादुर देउवाले आफैं अघि सर्ने संकेत गरिसकेका छन्।
यस्तै, १३औं महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवासँगै पराजित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा १३औं महाधिवेशनको पहिलो चरणको मतदान प्रक्रियामा सभापति उम्मेदवार बनेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत सभापतिका लागि मैदानमा उत्रने संकेत देखिएको छ।
सिटौलाले १३औं महाधिवेशनमा पहिलो चरणको निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि दोस्रो चरणमा देउवालाई नै सघाएका थिए। कांग्रेसभित्रको पुरानो संस्थापन मानिएको कोइराला परिवारबाट समेत आगामी महाधिवेशनका लागि उम्मेदवार बन्ने विषयमा कांग्रेस वृत्तमा चर्चा सुरु भइसकेको छ। कोइराला परिवारबाट वर्तमान महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता डा. शेखर कोइरालामध्ये एक जना उम्मेदवार बन्न सक्ने चर्चा कांग्रेसभित्र सुरु भएको छ।
पौडेलले भने यही नेतृत्वबाट कांग्रेस अघि बढ्न नसक्ने भन्दै बेलाबखत आफू उम्मेदवार बन्ने संकेत गर्दै आएका छन्। सिटौलाले केही दिनअघि झापा पुगेर उम्मेदवार बन्ने संकेत गरेका छन् भने कोइरालाद्वयले जिल्ला दौडाहाका क्रममा उम्मेदवार बन्न सक्ने बताउँदै आएका छन्।
महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर नै वर्तमान सभापति देउवा पौडेल पक्षका केही प्रभावशाली नेतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएका छन्। देउवाले १७ फागुनमा पार्टीमा रिक्त रहेका विभागमध्ये १३ विभाग गठन गर्दा पौडेल समूहबाट अलग्गिएका केही नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। देउवाले गत सोमबार सात विभाग गठन गरेका थिए। उनले महाधिवेशनमा आफ्नो प्रभाव देखाउन २८ विभागलाई बढाएर ४७ बनाइसकेका छन्।
देउवाले पौडेल समूह छाडेर आएका नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द भट्टराईलाई नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागको जिम्मेवारी दिइसकेका छन्। यस्तै, देउवाले चिनकाजी श्रेष्ठलाई उद्योग व्यापार विभागको जिम्मेवारी दिएका छन्। १३ औं महाधिवेशनअघि फरक समूहमा रहेर महाधिवेशनपछि निरन्तर आफूलाई सघाउँदै आइरहेका आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई देउवाले वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागको जिम्मेवारी दिएका छन्।
१३औं महाधिवेशनको केही दिनअघि देउवा समूहमा प्रवेश गरेका प्रभावशाली नेता फरमुल्लाह मन्सुरलाई देउवाले मुस्लिम विभाग र अर्जुनप्रसाद जोशीलाई स्थानीय तह समन्वय विभागको जिम्मेवारी दिएका छन्। देउवाले जिम्मेवारी नपाएका केही नेतालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएका छन्। उनले विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेस भित्रिएकालाई समेत केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएका छन्।
देउवाले एकतर्फी रूपमा विभाग गठनको निर्णय गर्दा पौडेल पक्षले भने संस्थापनको रणनीतिलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा वीरगञ्जमा प्रदेश २ स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्दै थियो। वीरगञ्जबाट फर्किएपछि बुधबार पौडेल समूहले पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको ठमेलस्थित निवासमा शीर्ष नेतासहित केन्द्रीय सदस्य र जिल्लाका उपसभापतिसँग छलफल गरेको थियो। पूर्वमहामन्त्री सिटौलासमेत जिल्ला दौडाहामा निरन्तर लागिरहेका छन्।
संस्थापन समूहले भने आफ्नो प्रभाव र क्रियाशीलता देखाउन गत बुधबार मात्रै ७७ जिल्लाका उपसभापतिलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय डाकेको थियो। राजधानी दैनिकमा खबर छ।